Unakekele i-peach entwasahlobo
I-Peach iyisiko esithandayo nesithandane. Izithelo zawo akuzona nje ezihlwabusayo kuphela, kodwa futhi ziyasiza. Iqukethe amavithamini amaningi kanye nezici zokulandelela.
Ukuze ujabulele izithelo zomuntu we-peach akuyona nzima, into eyinhloko ukukhetha ukunakekelwa okufanele kwepayipi.
Ukunakekela umuthi we-peach
Ukunakekela nokulima umuthi we-peach kuhlanganisa ukulandela imithetho eyisisekelo eqondiswa ukulima nokuzala kwezihlahla: ukuchelela ngesikhathi esifanele, ukufaka umanyolo, ukusika ngezikhathi ezithile nokwelashwa ezivela ezinambuzane nezifo.
Ekuqaleni kwentwasahlobo, lapho izinsuku zifudumala futhi zingenamandla, futhi izinga lokushisa lomoya lifika ku-4 ° C, kubalulekile ukwenza ukwelashwa kokuqala kwe-peach tree kusukela ebusika nezilokazane. Ukucubungula okuqhubekayo kwenziwa ngo-Ephreli, ekuqaleni kokuqhakaza kwamaqabunga amaqabunga, eduze ne-pink bud. Ngalesi sikhathi kunconywa ukuphatha umuthi we-peach ngenye yefungicides equkethe ithusi. Amaqabunga ama-curl, i-klyasterosporiosis, i-kokikomikoza nokunye okuningi-angagwenywa uma ephathwa ngesisombululo se-3% se- Bordeaux liquid .
Ukunakekela i-peach entwasahlobo kusiza ukuvikela izimbali ekuqhenqeni. Ukuze wenze lokhu, kubalulekile ukugcoba umuthi wonke nge-lime nge-sulfate ye-copper, ngaleyo ndlela uyeke izimbali.
Isinyathelo esibalulekile ekunakekeleni i-peach entwasahlobo yisihlahla. Yenziwa phakathi nesigaba se-bud bud, kanye nokuqala kwezimbali. Ukususa amagatsha aphethwe yiqhwa noma izifo. Futhi, ukusika izidingo kuyadingeka ukukhulula inqwaba yezithelo ezincane, amagatsha angadingekile, ukuthuthukisa ukungena kwelanga. Uma ungenzi lokhu - ekugcineni izihlahla ziphelile, zithinteka yizifo ze-fungal, ama-virus, azibekezeli ebusika, ziyafa ekuseni.
Cabanga ngezinhlobo zokwehlisa umuthi wesithelo :
Ukusika iziqu ngegatsha - ukushintshwa. Ihlumela elithuthukile futhi elincane lifinyezwa cishe izinso ezingu-8, futhi lishiyelwe ukuzala. Owesibini unciphise izinso ezimbili. Izosetshenziselwa njenge-bitch - indawo yokuzala ngonyaka ozayo.
Isihlahla eside. Izimbali ezengeziwe zisusiwe ngesikhathi sezimbali. Lokhu kwenziwa ukunciphisa umthwalo wezithelo emagatsheni kanye nomuthi uqobo.
Ukwakhiwa nokulungiswa komqhele. Futhi ubizwa ngokuthi ukusika izihlahla. Susa amahlumela ashisayo, afriziwe nezifo noma izinambuzane.
Ukudubula kokugcina kusiza ukulawula umthwalo wokuvuna, kokubili ukudubula kanye nomuthi njengento yonke. Kuthathwa ngo-Ephreli nge-bud bud noma ngombala. Amagatsha angaphezu kwalokho, amahlumela amafutha, ekhula ngaphakathi komqhele, anqunywe ngendandatho.
Ngemuva kokucubungula, kuyadingeka ukugcoba amanxeba omuthi we-peach nge-jerzeji noma ipeyinti yamafutha.
Ukunakekela nokukhula kwezithombo
Kubalulekile ukwazi ukuthi ukusoka kwazo zonke izithombo zomuthi we-peach kwenzeka entwasahlobo, kungakhathaliseki ukuthi betshalwe nini. Ukudikibala ngokusika izihlahla kunganciphisa amathuba okusinda kwezithombo. Ukuze wenze lokhu, unciphise wonke amahlumela ezitshalweni zezinso ezingu-1-2. Kulezi, kamuva, amahlumela azokhula ukuze akhe amagatsha omzimba.
Ukwenziwa komqhele kwenzeka ngaphambi kweminyaka emihlanu yomuthi. Ukunakekela izithombo ze-peach ukulawula ngokusiza ukusika umqhele omuhle, owusizo futhi othembisayo. Ngonyaka wokuqala wokutshala, izithombo zidinga ukushiya amagatsha emasipha. Kubalulekile ukuthi ayitholakali ngecala elimangalisayo futhi lisendaweni ethile ukusuka komunye nomunye. Endabeni lapho kudingeka khona ukushiya igatsha elisezingeni eliphezulu - liqiniswa kahle. Ukuze wenze lokhu, ungayifaka esikhundleni sayo noma usibophe emgodleni ohlangene emhlabathini.
UDaffodil ukuqeda ekhaya
Ukunakekelwa kwe-cherry - ukunakekelwa, ukulima nokutshala izihlahla
Zamiokulkas - ukunakekela ekhaya
Ukukhanda okusajingijolo - ukutshala nokunakekelwa
I-Phytoverm yezitshalo zangaphakathi
Amahlumela akhula ephepheni lezindlu zangasese
I-Ordinary Portalac - indlela yokulwa?
Umswakama Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi - Ukukhula nokuNakekela
Amagilebhisi - izifo nokulawula kwabo
Izithelo ezidliwayo ze-cactus
U-Justin Bieber usekela indodana ka-Arnold Schwarzenegger emnyangweni we-"Midnight Sun"
Amakhowe agwetshiwe - zokupheka okumnandi kakhulu kuhhavini, i-microwave ne-multivark
U-Anne Hathaway ukhulelwe
Amafutha okuphulukiswa okulimazayo - umphumela osheshayo
Ukwelashwa kwesifo sofuba se-coronary arteries
Izinwele esifubeni kwabesifazane
Indima kaDkt House eyakhazimulisiwe uHugh Laurie, kodwa ... yonakalisa impilo yakhe
Imibono yenkampani yonyaka omusha
"Real" ngokumelene nohambo lukaCristiano Ronaldo ukuya eMorocco
Ukuqoqwa kwemifino ye-Spring Zyvanshi 2013
Ifenisha ekamelweni lentsha yomfana
Ngingenza kanjani isifiso sami sigcwaliseke?
Indlela ukupheka umzala?
Umbala wezindonga ekhishini
Ukushisa okuvamile kumakati
Amafutha omnqumo avela emanzini athile